I-PANTONE 2018 UMBALA WONYAKA WE-ULTRA VIOLET MEANING - UHLOBO
Lo ngumbala wePantone woNyaka ka-2018
NguDisemba, kwaye ixesha leeholide lilapha ngokusemthethweni. Kodwa kubathandi bemibala, namhlanje yiholide kwaye ngokwayo: usuku lwePantone lubhengeza umbala wabo woNyaka ka-2018. Ngo-2017, baya kumbala oqaqambileyo, onamagqabi. ebizwa ngokuba luhlaza . Ukukhetha kwabo iminyaka elishumi, ngaba baya kuba nesibindi, okanye babuyele kwi-hue ethambileyo? Masifumanise:
(Ityala lemifanekiso: Pantone)
Umbala wePantone wonyaka we-2018 yi-Ultra Violet! Ngelixa abahleli boNyango lweZindlu bekhona ukubheja kumthunzi othile otyheli , Imfusa lukhetho olukhaliphileyo (kwaye singene kulo).
Kutheni ndiqhubeka ndibona u-11
Siphila kwixesha elifuna ubuchule kunye nokucinga. Olu luhlobo lwempembelelo yokuyila eyinzalelwane yemveli kwi-PANTONE 18-3838 Ultra Violet, imfusa esekwe eluhlaza okwesibhakabhaka ethatha ulwazi lwethu kunye nokubanakho kwinqanaba eliphezulu, utshilo uLeatrice Eiseman, uMlawuli oLawulayo wePatone Colour Institute. Ukusuka ekuhloleni itekhnoloji entsha kunye nomnyele omkhulu, ukubonakalisa ubugcisa kunye nokubonakalisa ngokomoya, ukukhanya kwe-Ultra Violet ekhanyayo kwindlela eya kokuzayo.
Xa sicinga emfusa, kunzima ukuba ungacingi ngeNkosana, ngubani ofumene eyakhe iPantone hue esemthethweni ekuqaleni kwalo nyaka . Ewe kunjalo, iPantone ibiza ummeli wombala weculterculture kunye nokuqaqamba kobugcisa, ikwabonisa ukuba uDavid Bowie noJimi Hendrix bazisa umthunzi.
(Ityala lemifanekiso: Esteban Cortez)
Umbala oyimfihlakalo unxulunyaniswa nengqondo kunye nonxibelelwano, into esinokuyisebenzisa sonke ngaphezulu.
Umbala wePantone woNyaka uye wathetha okungaphezulu kakhulu kunoko 'kuqhubekayo' kwihlabathi loyilo; yimbonakalo yokwenyani yento efunekayo kwihlabathi lethu namhlanje, wongeze uLaurie Pressman, Usekela Mongameli wePantone Colour Institute. Njengabantu kwihlabathi liphela baya benomdla kumbala kwaye baqonda ukukwazi kwabo ukuhambisa imiyalezo enzulu kunye neentsingiselo, abayili kunye neempawu kufuneka bazive benamandla okusebenzisa umbala ukukhuthaza kunye nefuthe. Umbala woNyaka ngumzuzu omnye ngexesha elinikezela umkhombandlela weqhinga lomhlaba wokuyila kunye noyilo, ubonakalisa umsebenzi wePantone Colour Institute unyaka wonke usenza okufanayo kubaqulunqi nakwiimpawu.
Ucinga ntoni nge-Ultra Violet? Sixelele kwizimvo!
kuthetha ntoni ukubona u-11 11
Iindaba kunye noMlawuli weNkcubeko
UTara lonyango lweeNdawo kunye noMlawuli weNkcubeko. Xa ungashukumi nge-Instagram ucofa kabini iifoto zezilwanyana kunye neememesti zeenkwenkwezi, uyakumfumana ethengisa ngokurhangqileyo ejikeleze iBoston, kayaking kwiCharles, kwaye uzama ukungazithengi ezinye izityalo.
IKhalenda yeNetflix yeHalloween ihambisa iMovie eyoyikisayo eyahlukileyo mihla le
Uyicoca njani iRug
Amacebo ama-5 angenangqondo e-Bath-Free Free Dog Bath
Ngubani Owayesazi? IAmazon inobugcisa obumangalisayo boDonga olungaPhantsi kwe- $ 50
Ukuba kwi-Shakers: Yenza i-Smart & Stylish Peg Rail Perimeter
Imizekelo eyi-14 egqibeleleyo yePhepha lokuSonga elifanele iBoutique (kumaxabiso eziyobisi)
I-12 yawona Makhaya angaqhelekanga, aMakhaya aKhethekileyo esiSele emhlabeni jikelele
Asingabo bonke abathathe umhlala phantsi kunye neDisney: Izizathu ezi-5 zokuba ndiGcine ndibuyela kuMzantsi mpuma weU.S.
Umbala Wodonga Ukuya nefenitshala yeCherry Wood?
Yeyiphi i-Chip Gaines 'Ebusuku ejele eFundise i-Fixer Upper Stars malunga neMali
Uyenza njani iNew Nursery Mobile
Amakhaya eStucco aphantsi ngokupheleleyo-Nasi isizathu
I-333 intsingiselo kumthetho wokutsala
ndihlala ndibona inani u-11
lithetha ntoni inani lama-222
lithetha ntoni inani lama-444 leengelosi
Intsingiselo yenani leengelosi ezili-1212
Ingelosi amanani 111 anentsingiselo
ndibona i11 11 ngalo lonke ixesha